Maalinta u danbeysay doorashada Mareykanka iyo Biden oo doonayo inuu kursiga ka tuuro Trump | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Maalinta u danbeysay doorashada Mareykanka iyo Biden oo doonayo inuu kursiga ka...
Maalinta u danbeysay doorashada Mareykanka iyo Biden oo doonayo inuu kursiga ka tuuro Trump
Laba magaalo oo yaryar oo ka tirsan gobolka waqooyi-bari ee New Hampshire ayaa codbixinta ku billaabay saqbadhkoodii caadiga ahaa
Maalinta doorashada ee Mareykanka ayaa si rasmi ah u socota. Indha-indheynta ayaa ku jirta loolanka loogu jiro Aqalka Cad ee u dhexeeya Madaxweyne Donald Trump, oo doonaya xilli labaad, iyo ninka la tartamaya, halyeeyga Dimuqraadiga Joe Biden.
Trump wuxuu shan isku soo bax ku qabtay afar gobol – North Carolina, Pennsylvania, Michigan iyo Wisconsin – maalintii ugu dambeysay ololaha Isniinta. Biden inta badan Isniinta wuxuu ku qaatay Pennsylvania iyo Ohio.
Trump iyo kooxdiisa waxay si isdaba joog ah u riixeen sheegashooyin aan sal iyo raad lahayn oo ah in codadka la tiriyey Maalinta Doorashada kadib ay caddeyn u yihiin khaladaadka.
Codbixinta hore waxay kor ugu kacday heerar aan waligeed horay loogu arag doorashooyinka Mareykanka – 98.7 milyan codadkii hore ayaa lagu dhiibtay shaqsi ahaan ama boostaba.
Waad salaaman tihiin kuna soo dhawow barnaamijka tabinta leh ee Al Jazeera ee ku saabsan doorashooyinka Mareykanka. Kani waa Shereena Qazi.
Codbixinta Mareykanka 2020: Maxay haweenku u go’aansadaan doorashooyinka Wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato doorashooyinka Mareykanka – ee ku saabsan sawirada
21 daqiiqo kahor (07:39 GMT)
Codbixinta Texas-ka iyada oo loo marayo codbixinta ayaa la taageeray iyadoo garsooraha uu hor istaagayo dalabkii Jamhuuriga ee diidmada codadka
Xaakim federaal ah oo ku sugan Texas ayaa diiday dalab ka yimid xisbiga Jamhuuriga oo ahaa in laga tuuro ilaa 127,000 cod oo horey looga dhiibtay doorashada madaxtinimada Mareykanka ee goobaha codbixinta ee Houston, oo ah aag u janjeera dhanka dimuqraadiga.
Kani waa daaqad modal ah.
Dacwad oogayaashu waxay ku eedeeyeen Karaaniga Degmada Harris Chris Hollins, oo ah Dimuqraadi, inuu si sharci daro ah ku dhaqaaqay markii uu ogolaaday in la dhex wado codbixinta oo lagu badalo intii lagu jiray cudurka coronavirus.
Amarka qoraalka ah, ayuu garsooraha degmada Mareykanka Andrew Hanen wuxuu ku sheegay in dacwad oogeyaashu aysan lahayn istaag ay ku keenaan dacwada ayna sugayaan waqti dheer si ay u dacweeyaan.
“In laga xayuubiyo xuquuqda in ka badan 120,000 oo codbixiyeyaal ah oo u codeeyay sidii lagu faray maalin ka hor doorashada la qorsheeyay ma u adeegayso danaha dadweynaha,” ayuu garsooraha qoray, isagoo intaa ku daray in horay-u-wadista codeynta hore loo oggol yahay sharciga Texas.
55 daqiiqo kahor (07:04 GMT)
Trump wuxuu saadaaliyay ‘guul kale oo qurux badan’ ololihii ugu dambeeyay ee joojinta
Madaxweyne Donald Trump ayaa Salaasadii saadaaliyay “guul qurux badan” ololihiisii ​​doorashada ee ugu dambeysay ee joojinta saacado ka hor inta aan codbixinta laga furin guud ahaan Mareykanka.
“Waxaan heleynaa guul kale oo qurux badan berrito,” ayuu u sheegay dadweyne isugu soo baxay Grand Rapids, Michigan, isla meeshii uu ku qabtay isu soo baxii ololaha 2016, markii uu ka careysiiyey codbixintii uu kaga adkaaday Hillary Clinton.
“Waxaan sameyn doonaa taariikh markale,” ayuu yiri.
59 daqiiqo kahor (07: 01 GMT)
Goobaha codbixinta ayaa ka furan Mareykanka iyadoo Biden uu doonayo inuu kursiga ka dego Trump
Maalinta doorashada ee Mareykanka ayaa si rasmi ah u socota, iyadoo isha lagu hayo ugu weyn ee diirada lagu saaray loolanka loogu jiro Aqalka Cad ee u dhaxeeya Madaxweyne Donald Trump, oo doonaya xilli labaad, iyo ninka la tartamaya, halyeeyga Dimuqraadiga Joe Biden.
[Alia Chughtai / Al Jazeera]
Laba magaalo oo yaryar oo ku taal gobolka waqooyi bari ee New Hampshire ayaa bilaabay codbixinta iyaga oo saqda dhexe saqdii dhexe la furay goobaha codbixinta.
Qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee xeebta bari waxay arki doonaan goobaha codbixinta oo furan 6 subaxnimo (1100-1200 GMT). Intaas ka dib, goobaha codbixinta waxay ka furmi doonaan guud ahaan lixda aag ee waqtiga ka badan 50 gobol ee ka qeyb qaadanaya doorashada. Codbixinta ugu dambeysa waxay xirmi doontaa Alaska, oo ku taal galbeedka fog, markii ay subaxda bari tahay.
1 saac kahor (06:38 GMT)
Xaafadda New Hampshire ayaa markii ugu horreysay dhiibtay codadkii Maalinta Doorashada Mareykanka
Codbixiyeyaasha Dixville Notch, oo ah tuulo ay degan yihiin 12 qof oo ku nool gobolka New Hampshire ee dalka Mareykanka, ayaa bilaabay maalinta doorashada saacadda saqda dhexe iyadoo ay si wada jir ah ugu codeeyeen murashaxa xisbiga Dimuqraadiga ah ee Joe Biden.
Codbixinta iyo tirinta ayaa qaadatay daqiiqado kooban, iyadoo shan cod la siiyay Biden midna uusan helin madaxweyne Donald Trump, oo doonaya xilli labaad.
Magaalada yar ee waqooyi-bari ee ku taal bartamaha keynta, una dhow xadka Kanada, ayaa dhaqan ahaan u codaysay “markii ugu horreysay waddanka” tan iyo 1960.
Tuulada deriska la ah ee Millsfield sidoo kale waxay bilaabaysaa codbixinta saqda dhexe laakiin tuulo seddexaad oo aagga ah, oo caadiyan raacaysa isla dhaqanka, ayaa la joojiyay codbixintii habeenkii sababtoo ah cudurka faafa ee coronavirus.
2 saac kahor (05:33 GMT)
Biden iyo Trump waxay u guntadeen dagaal maxkamadeed
Trump iyo Biden waxay sameeyeen riixitaankii ugu dambeeyay ee codadka iyagoo ololahooda u diyaar garoobaya khilaafaadka doorashada kadib taas oo sii dheereyn karta doorashada madaxtinimada ee kala qaybsan.
Trump – oo daba socda codbixinno ra’yi qaran ah – ayaa sii waday weeraradiisa aan salka lahayn ee waraaqaha waraaqaha lagu diro, isagoo u sheegaya wariyeyaasha in Pennsylvania qorshaheeda tirinta codadka waraaqaha ee yimaada illaa saddex maalmood ka dib Maalinta Doorashada ay horseedi doonto qish ballaaran, inkasta oo uusan sharraxaad ka bixin sida.
Wuxuu ku booriyay maxkamada sare ee maraykanka inay dib u eegis ku sameyso go, aankeeda ku darsaday kordhinta meesha. Maxkamaddu waxay ka tagtay suurtagalnimadaas inay furan tahay.
Previous articleElection Day in US as Biden seeks to unseat Trump
Next articleMuhiimadda gobolka Ohio ee doorashada Mareykanka ee maanta